Barakacayaal dalbaday gargaar – Radio Muqdisho
Qoysaska Barakacayaasha ah ee ku nool Duleedka Deegaanka Tareedisho ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay codsanayaan in gurmad lala soo gaaro maadaama lagu da galay xilli Roobaadka Gu’ga.
Barakacayaasha ayaa gaaraya 500 oo qoys iyagoo ku jira guryo ka samaysan Baco iyo qoryo kuwaasoo Awood u lahayn in ay celiyaan daadadka Roobka uu keeno iyo ku layka Qoraxda maalintii ah Madaxda sare ee Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Hay’adaha Samafalka ee ka howgala dalka ayey ka dalbadeen in gurmad deg deg ah ay la soo garaan si noloshooda ay dib ugu soo laabato.
Madaxa Samafalka iyo mashaariicda maamulka degmada kaxda ee gobolka Banaadir Guuleed Maxamed Tifow ayaa sheegay in dadkaan ay yihiin kuwo Dowladda ay halkaasi dajisay isla markaana ay ku nool yihiin xaalado adag oo u baahan in laga caawiyo dhinacyada Waxbarashada, Caafimaadka iyo sidii ay u heli la haayeen Adeegyada kale ee aa saasiga u ah nolosha Aadanaha.
Inkastoo laguda kalay Xilli Roobaadka gu’ga ayaa waqtiyadaan oo kale waxa ay xaalad adag soo wajahaan qoysaska liita isla markaana Awoodin in ay helaan nolol maal meedka qoyskooda , waxaana in dadkaan la caawiyo ay tahay waajib saaran qofkasta oo Soomaali ah haystana Dhaqaale maadaama Diinta Islaamka ay na farayso in la gar-gaaro dadka masaakiinta ah markasta.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika oo loogu baaqay inay is dajiyaan